Matoor jumlada caadada qabow qabow Glass shumaca diffuser shumaca Weelka warshad iyo saarayaasha | Winby
matte frosted caadadii Glass reed difacuser shumaca Weelka
Midab buluug ah oo midabkiisu yahay midab buluug ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya Muraayadaha / Shumaca Weelka udgoon leh oo leh dabool
1. Weelkan shumaca waxaa lagu sameeyay muraayad barafoobay iyo daboolka bamboo, dusha sare ayaa aad u wanaagsan.
2. Weelka shumaca waxaa lagu sameyn karaa cabir & midab kala duwan, waxaan aqbalnaa macaamiisha 'requriments'.
Cabir: 6.2cm (Width) * 8.1cm (Dherer) 8.2cm (Width) * 9.8cm (Dherer) 10.2cm (Width) * 13.1cm (Dherer)
dhalooyinka qabow ee shumaca madhan ee haya shamaca samaynta shumaca
Markabkan shumaca dhalada ah wuxuu leeyahay cabirro iyo midabbo kala duwan. Waxaad ka dooran kartaa midabka kaarka pantone. Dabcan, waxaan kuu soo bandhigi karnaa adeeg muunad kuu ah adiga.
Waad sameyn kartaa weelka shumaca dhalada iyo weelka cawska ku faafiya sida set ahaan, waxaadna u isticmaali kartaa sanduuqa hadiyadaha inaad ku xirxirato, taas oo hubaal horumarin karta tayada iyo darajada sheyga
Sidoo kale, weelkan shumaca ah waxaa lagu buufiyay rinjiga deegaanka ee biyaha ku saleysan. Marka waa bey'ad-saaxiibtinimo umana baahnid inaad ka walwasho tayada.
Maraakiibteena shumaca dhalada kulul ee iibiya waxaa si aad ah u amaanay macaamiisheenna waxaana lagu iibiyey dalal iyo gobollo badan.
Miisaanka 175g 225g 450g
Dabool Daboolka alwaaxa ama daboolka bamboo, astaan ​​ayaa lagu xardhan yahay daboolka
Adeeg Custom / ODM OEM / adeegga muunad
Dhalooyinka shumaca dhalada ah waxaa lagu sameyn karaa saameyn kala duwan, maadaama lagu buufiyo cufan-barafoobay 、 la safeeyey. Waxaad dooran kartaa saameynta aad jeceshahay. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku daabacdo astaantaada ama sumadahaaga koobka dhalada, sidoo kale waan sameyn karnaa. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad noosoo dirto nashqadahaaga, waxaan kuu sameyn karnaa tixraac ahaan.
Hore: Wick Shumaca Wick oo leh Waxyaalaha Paraffin Wax Dahaarka leh
Xiga: Qasacadaha 4OZ ee daasadaha birta ah ee lagu sameeyo shumaca
Ku iibinta kulul dhalooyinka shumaca dhalaalaya ee qabow leh daboolka
10oz Ku buufin weelka shumaca dhalada leh bamb ...